Iapile kunye neapos; s iphone 12 lineup eboniswe kuyilo oluhle
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Iapile kunye neapos; s i-2020 ye-iPhone 12 umgca oboniswe kuyilo oluhle lonikezelo
Iapile kunye neapos; s i-2020 ye-iPhone 12 umgca oboniswe kuyilo oluhle lonikezelo
I-Apple ayisiyo & apos; ngokungxama ngokungxamisekileyo xa kufikwa kumba wokuyilwa kwakhona kweemveliso. Inkampani ibinendlela ecekeceke kwaye ebaliweyo ekubumbeni ukujonga kunye nokuziva kweemveliso zayo kule minyaka idlulileyo. Kuninzi kakhulu, enyanisweni, ukuba & iiapos zihlala zitsala ukugxeka malunga noku, uninzi luziva ngathi apile idlala kakhulu kwicala elikhuselekileyo.
Inye into eqinisekileyo, nangona-xa iApple itshintsha uyilo yenye yeemveliso zayo, ihlala iziva ngathi yinto enkulu. Kwaye mhlawumbi ezo zinto ziyinxalenye kuba sinikwe imeko yokulindela ukunyuka okunyukayo, kodwa kukwakhona ngenxa yokuba uninzi lweenguqulelo ezinkulu ziza emva kweminyaka yokucinga kunye nophando.
Masithathe i-iPhone, umzekelo. Ngokuqinisekileyo olona tshintsho lukhulu kwindlela iifowuni zeApple ezijongeka ngayo nge-iPhone X kunye nomboniso wayo omde ongafakwanga. Kodwa ngaphandle kwaleyo, zonke ii-iPhones zivakalelwa ngokungathi zaphoswa kwisikhunta esifanayo ne-iPhone 6, eyaziswa ngo-2014. Imijikelezo ejikeleziweyo, isakhelo esinoburhabaxa, iglasi yescreen esineglasi (2.5D) -izinto zonke eziphambili ze-iPhone Uyilo olungatshintshi kwaphela kule minyaka mi-5 idlulileyo.
Oku kungatshintsha, nangona kunjalo, ngokuziswa kweemodeli ze-2020 ze-iPhone, apho i-Apple inamahemuhemu okuvuselela uyilo oludala ukusuka kwishumi leminyaka ngaphambili-le le-iPhone 4.
I-iPhone X iphawule ukutsiba okukhulu kuyilo lwefowuni ye-Apple, kodwa i-iPhone 12 iya kujonga indlela ethile
Ubuhle boxy ye-iPhone 4 kunye ne-iPhone 5 ikulungele ukubuya kwiimodeli ezintsha ze-2020 ze-iPhone
Ubume obuthambileyo, oburhangqileyo obuneefowuni zika-Apple ukusukela kwasekuqaleni-ukugcina i-iPhone 4 kunye ne-iPhone 5-kuyavakala kwisikimu esikhulu sezinto, njengoko siyilelwe ukulunga kakuhle kuyo nayiphi na intende kwaye sikwenza kube lula ukusetyenziswa kwexesha elide isixhobo. Obo bume busebenze kakuhle kakhulu, enyanisweni, ukuba thina & apos; sicinezelwe nzima ukufumana iifowuni ezininzi kule mihla ezingenaziphetho zinemiphetho ejikelezileyo.
Nge-iPhone 12, nangona kunjalo, i-Apple inamahemuhemu okushenxisa kwimikhombandlela ethambileyo yemodeli zangoku ngokuthanda ubukhali, ubuhle be-boxier obuhambisa iimvakalelo zoyilo lwe-iPhone 4 kunye ne-5. Ngokwenyani, iApple sele izamile into efanayo IPad entsha, enesiphelo esibukhali kunemodeli zangaphambili. IMacBook, nayo, itshintshele kuyilo olufanayo, kuya kuba sengqiqweni ukuba i-iPhone ibajoyine. Emva kwayo yonke loo nto, iApple imalunga nokuhambelana.
Uyilo lwe-Apple iPhone 12 yoyilo
Ngokusekwe kumarhe okuba iimodeli ezilandelayo ze-iPhone zinokuthi zihambise le midlalo yobuhle, siye sazenzela umxholo othile ukubonisa olu tshintsho kuyilo lwemveliso. Kwaye thina & apos; siye sathi-nditsho nokushiya isihloko sokungqinelana kwimigca eyahlukeneyo yemveliso ecaleni-olu luyilo lukhangeleka lupholile.
Kusesekuqaleni kakhulu, ngoko ke asinako ukuthembisa ukuba ii-iPhones ze-2020 ziya kujongeka ngokuchanekileyo, kodwa zihamba ngamarhe-kwaye sibone ukuba uyilo olutsha luya kulunga njani ecaleni kwe-iPad kunye neMacBook imigca-thina & apos; d yithi kukho & apos; ithuba elifanelekileyo.
I-iPhone 12 ayinakupela isiphelo senotshi, kodwa iya kuba ncinane
I-iPhone 12 iya kuba neekhamera ezimbini ngasemva, njenge-iPhone 11, kodwa kulindeleke ukuba ibe nenotshi encinci kunye ne-bezels ezincinci
Ngokwe- amarhe kutshanje , IApple inokuba izama uhlobo lwe-iPhone olungena-notch, kodwa i-bezels ezijiyileyo. Uluvo kukuba inkampani iya kuba nakho ukwenza i-miniaturize ikhamera ye-ID ye-TrueDepth Face, into esendlebeni, kunye nekhamera ejonge ngaphambili ukuze bakwazi ukungena kwi-bezel ephezulu yefowuni. Ewe kunjalo, oku kungakhokelela kwii-bezels ezixineneyo macala onke, kodwa kunokuba yinto elungileyo yorhwebo, ukuba kunokwenzeka oko.
Enye enye ukusasazeka ngokubanzi Ibango lokuba i-iPhone 12 ayizukuyiphendula iyinyani kwiscreen sonke ebesiyilindile, kodwa endaweni yoko iya kunciphisa inotshi phantsi kakhulu, ngalo lonke ixesha igcina amandla apheleleyo e-ID yobuso.
Kukho ii-apos ezibizwa ngokuba 'yiminyaka emithathu yokuhlaziya imveliso' leyo kubonakala ngathi iApple isebenza kuyo (ubukhulu becala, ubuncinci). Oko kukuthi, xa utshintsho olukhulu luziswa, luyanyanzeliswa luze lupolishwe kwizizukulwana ezithathu kude kufike olunye uvuselelo. Le patheni ikhokelele abaninzi ukuba bakholelwe, kubandakanya nathi, ukuba Ifowuni ye-12 izakuzisa into entsha ngokwendlela yoyilo. Nokuba utshintsho luya kuba lukhulu njengoko kususwe inotshi, kuhlala kubonakala.
I-iPhone 12 inokuba yi-Apple & apos; ifowuni yokuqala yekhamera ye-quad
I-Apple ibigalele imali kakhulu kwi-AR kule minyaka idlulileyo. Nge-ARKit esekwe njengeqonga elinobuchule bokwenyani esonyukayo, kunye nomsebenzi kwi Iiglasi zeApple uxelwe ukuba uhamba ngesantya esisempilweni, besingamangaliswa xa iApple iphehlelela i-Pro Pro entsha ngeskena seLiDAR ngasemva. Okwangoku, silindele ukuba i-iPhone 12 Pro kunye nePro Max zixhotyiswe ngezikena zeLiDAR.
Ukufunyanwa kokukhanya kunye nesikena esirhangqileyo (okanye iLiDAR ngokufutshane) sinokulinganisa ubunzulu ngokuchanekileyo kunekhamera eqhelekileyo, ke lukhetho olufanelekileyo lokusetyenziswa kwenyani. Ikhamera ye-LiDAR isebenzisa ukukhanya kwe-ultraviolet okanye kufutshane ne-infrared kwimephu engqongileyo ngokweenkcukacha. Isebenza ngokudibeneyo kunye nesenzi esivakalisa imiqondiso yokukhanya, etsiba kwindalo esingqongileyo kwaye ibuyele kwisenzi. Ifowuni emva koko ibala ixesha elithathe isiginali ukubuyela umva kwi-sensor, ngaloo ndlela isenza imephu enzulu echanekileyo yendawo ngaphandle kwekhamera eqhelekileyo.
Ngelishwa kwabo babenethemba leyangokuikhamera yesine, i-LiDAR ayisiyiyo leyo. Isetyenziselwa kuphela ukulinganisa ubunzulu hayi ukuthatha iifoto okanye iividiyo.
Ngaba ukubuya kweRose Gold ecaleni kombala omtsha wobusuku bobusuku?
IPhone 12 Pro IMVELISO Ingqondo yoyilo oluBomvu
I-Space Grey kunye neSilivere zizinto eziphambili ze-Apple kunye ne-apos; uyilo lwemveliso, kodwa uthini ngeminye imibala? Ewe, nge-iPhone 11 Pro sifumene ulongezo olutsha olunomdla ngohlobo lweMidnight Green, ebesiluthanda kakhulu, nangona oko kungazange kusinqande ekulangazeleleni ezinye iindlela. Nokuba zintsha, kunyanzelekile.
I-Rose Gold ngokuqinisekileyo yayiyeyona mibala ithandwayo ye-iPhone emva kwemini, kodwa asikaze siyibone ukusukela nge-iPhone 7. I-iPhone XS kunye ne-11 Pro zazisa ngeGolide eNtsha, emele ukuvala umsantsa phakathi kweGolide kunye neRose rhoqo. Igolide, kodwa ayisiyiyo. Sithanda ukubona i-iPhone entsha ebonisa umthunzi oqaqambileyo wabanye ababengaphambi kwayo, nokuba ikwindlela ethobekileyo kunangaphambili.
Ukuya kuthi ga kwimibala yaphakathi ezinzulwini zobusuku, thina & apos; d ukuba sitshintshwe malunga nohlobo oluphakathi kweBlue Night! Sicinga ukuba umbala omnyama oluhlaza-grey ungasifanela ngokwenene isitayile se-iPhone, ke sidlale ngeenxa zonke ngombono de safikelela koko sicinga ukuba sisiphumo esihle kakhulu.
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo:Imifanekiso eboniswe kweli nqaku luyilo lokunikezelwa kwe-iPhone 12. Isekwe kulwazi lokuqala olukhoyo malunga nesixhobo, kwaye isenokungabonakalisi uyilo lwayo lokugqibela. Zive ukhululekile ukuzisebenzisa, ukuba nje unetyala ngeFowuniArena ngokubandakanya ikhonkco kweli nqaku.
I-iPhone 12 kunye ne-iPhone 12 Pro Max design design
I-iphone se 2020 yokuthelekisa ubungakanani
Inkqubo yeqela imele ntoni?
I-Apple iPhone 6s Plus vs i-Samsung Galaxy S6 Edge +
Ungayivumelanisa njani i-iPhone yakho entsha ye-5 okanye i-5c ngeGmail, abafowunelwa kuGoogle kunye neKhalenda
Abasebenzisi kungekudala bazokwazi ukuncokola namashishini ngeFacebook Messenger ngaphandle kokungena kwi-Facebook
I-T-Mobile inesicwangciso esitsha esihlawulelwa kwangaphambili sokufumana iziyobisi ngesantya esiphezulu
I-Apple iPhone 6 Plus vs Samsung Galaxy Qaphela 3